2018 na-amalite site na mmiri ozuzo karịa ụkpụrụ nkịtị | Network Meteorology
2018 na-amalite site na mmiri ozuzo karịa ụkpụrụ nkịtị
N'adịghị ka afọ 2017 anyị hapụrụ dịka nke kachasị ekpo ọkụ kemgbe 1965 na nke abụọ akọrọ, afọ 2018 abanyela yana oke mmiri ozuzo na mba ahụ dum, gafere nkezi nkịtị.
Mmiri ozuzo ahụ emeela ka ụkọ mmiri dịtụ mma, ọ bụ ezie na anyị ka dị obere. Kedu ka ọdọ mmiri anyị dị mgbe mmiri ozuzo na snowfalls gasịrị?
2 N'iji ya tụnyere 2017
3 Atụmatụ ọkọchị
Afọ 2018 amalitela na mmiri ozuzo bara ụba na mba ahụ, ebe ọ dị elu karịa ụkpụrụ nkịtị na ụbọchị mbụ nke Jenụwarị. Oké mmiri ozuzo nke mere na snow snow mere na ngwụsị Disemba enyerela aka belata ntakịrị mmiri mmiri Spain na-achịkọta kemgbe mmalite nke afọ mmiri site na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 10.
Onu ogugu nke mmiri dammed na Spain O si na 35% ruo 45%. N'oge a, na 2017, anyị nọ na 50% na 10 afọ gara aga na 60%. Site na ihe ị ga - ahụ ka anyị si dị anya site na ụkpụrụ nkịtị, ebe ọ bụ na anyị na - ekwu maka otu ụkpụrụ bara uru.
Mmiri mmiri ozuzo ewerewo ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ n'ókèala ọwụwa anyanwụ, ma e wezụga n'ebe ugwu nke Castilla y León, n'ebe ọwụwa anyanwụ nke Castilla-La Mancha na Andalusia na mpaghara Levante, dị ka data agbakọtara na Mlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ihu Igwe nke State (Aemet).
Ọnụ ọgụgụ karịrị 10 lita kwa mita mita anọwo na-agbakọba n'ọtụtụ ala mmiri na agwaetiti. N’ebe ọkara ọdịda anyanwụ nke Andalusia, sistemụ etiti na nke Iberia na mpaghara ugwu ọwụwa anyanwụ, nke sitere na Galicia ruo Gerona, enweela gafere 30 lita kwa square mita.
Ọdịdị mmiri ozuzo kachasị pụta ìhè bụ 100 lita kwa square mita bụ ndị meriri na mpaghara ndị dịpụrụ adịpụ na mpaghara Pontevedra na La Coruña, na mpaghara Cantabria na ugwu nke Guipúzcoa na Navarra.
Buru n'uche na emelitere data Aemet dịka nke Jenụwarị 11. Ogologo mmiri niile ka ruru n'ọdụ mmiri nke otu iyi ahụ, ha ka ga-adị ugbu a.
N'iji ya tụnyere 2017
E jiri ya tụnyere data maka oge a nke afọ 2017 (ọ bụ nke abụọ na-akachasị ekpo ọkụ kemgbe 1965), 2018 amalitela mmiri karịa. Enweghi oke mmiri ozuzo na 2017 emeela ka ọnọdụ ọkọchị ka njọ ma duga na mbelata na-aga n'ihu n'ọkwa nke ọdọ mmiri.
Mịnịstrị na-ahụ maka ọrụ ugbo na azụ azụ, nri na gburugburu ebe obibi ejirila mmiri ozuzo kpọrọ ihe na Jenụwarị ma hụ na mmiri ozuzo a ahapụla mmiri mmiri nke 44,9 pasent na 35,5 percent. Mmiri ozuzo merenụ ga - enyere aka na uto nke ọka na izugbe maka mpaghara niile.
Ọ bụ ezie na anyị agaghị ewetu anya na nche anyị, ebe ọ bụ na anyị nọ n'ebe dị anya site na ụkpụrụ nkịtị nke mmiri mgbochi. Vingchekwa mmiri dị mkpa ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ichekwa akụ mmiri.
Iji belata ụkọ mmiri, Gọọmentị kwalitere na ngwugwu nke ọrụ mberede na ọnwa ndị na-adịbeghị anya, otu n'ime ihe ndị a gosipụtara omume ndị kwere ichikota hectometre cubic 350 ọzọ na ndagwurugwu Segura na Júcar, ndị na-ata ahụhụ kachasị na nrụgide mmiri.
Site na Mee 2016 ruo ugbu a, Gọọmentị na-eme ihe iji belata ụkọ mmiri na ndagwurugwu Segura na Júcar. Maka ya, ekenyela ihe karịrị nde euro 83. Oké ọkọchị bụ nnukwu nsogbu nye ụmụ amaala.
A ghaghị iwepu mmiri site na ebe ọ nwere ike ịbụ, ebe ọ bụ na mmiri adịghị ezo. N'ihi nke a, ekenyela euro 17,3 n'etiti 2015 na 2017 iji mee ka ọnụego mmiri etinyere. Tụkwasị na nke a, iji mee ka ogbugba mmiri n'ubi mee nke ọma ma bulie mmiri mmiri eji rụọ ọrụ ugbo, ekenyela nde euro 60,7 maka omume, ọkachasị na Huesca, León na Valencia.
Iji ghara ịchebe nchekwa ya, Mịnịstrị amalitela mkpọsa gbasara gburugburu ebe obibi banyere mmiri a na-akpọ “Mmiri na-enye anyị ndụ. Ka anyị lekọta ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » 2018 na-amalite site na mmiri ozuzo karịa ụkpụrụ nkịtị
New York ga-akwụsị itinye ego na mmanụ ọkụ